आज आइतवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस्, आजको दिन, २०७७ फागुन १६ गते - Candles Khabar
गृहपृष्ठ आज आइतवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस्, आजको दिन, २०७७ फागुन १६ गते
श्रीगणेशाय नमः ।। आज विक्रम संवत् २०७७ साल, फागुन महिनाको १६ गते तदनुसार ईशवीय सन् २०२१ अन्तर्गत फेव्रुअरी महिनाको २८ तारिख, आइतवार हो । सृष्टिदेखि हालसम्म १,९५,५८,८५१२१ वर्ष व्यतीत भइसकेका छन् । कलिकालको ५१२१औँ वर्षअन्तर्गत श्री शालिवाहनीय शाके १९४२, तथा नेपाल संवत् ११४१ अन्तर्गत प्रमादी नामको संवत्सर चलिरहेको छ ।
सूर्य उत्तरायणमा छन् । शिशिर ऋतुअन्तर्गत फागुन कृष्णपक्षको प्रतिपदा तिथि दिवा १२।५१ बजेसम्म रहनेछ । यो महिनाका देवता गोविन्द र मासदेवी धात्री हुन् । सूर्य कुम्भ राशिमा र बृहस्पति मकर राशिमा रहेका छन् । पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र दिवा ११।८ बजेसम्म रहनेछन् । यसैगरी आज धृति योग र कौलव करण रहेका छन् । आज सूर्योदय बिहान ६।३२ मा छ भने सूर्यास्त बेलुका ६।३ बजे हुनेछ । चन्द्रमा आज सिंह राशिमा रहेका छन् ।
आज आइतवार सूर्य नारायणको उपासना शभ रहनेछ । आजबाट फागुन कृष्णपक्षको आरम्भ भएको छ ।
साप्ताहिक राशिफल २०७७ फागुन १६–२२ गतेसम्म
उपप्रा. नारायणप्रसाद निरौला, ज्योतिषाचार्य
मेष राशिः कर्मक्षेत्र– यो साता उन्नतिदायी रहनेछ । कार्यक्षेत्रमा सफलता प्राप्तिका योग रहेका छन् । प्राविधिक कार्य व्यवसाय हुनेका निम्त साता फलदायी रहनेछ । आर्थिक दृष्टिले साताको पूर्वाद्र्ध उन्नत देखिन्छ । लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन् । सेयर व्यवसाय फलदायी बन्ने देखिन्छ । धनभावमा मंगल एवं राहुको निवासले स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । बिही र शुक्रवारको समय खर्चिले रहनसक्नेछ । उक्त दिन लेनदेनका कार्यमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ । धातुजन्य वस्तुको व्यापार व्यवसाय फलिभूत रहने देखिन्छ । विद्याको क्षेत्र लाभदायी रहनेछ । प्राविधिक पक्षको अध्ययनाथृिका निम्त साता सुखद् रहनेछ । कलात्मकक पक्ष लाभदायी रहनेछ । सांगीतिक क्षेत्रमा उन्नतिका साथै नयाँ अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ । वैदेशिक क्षेत्र मध्यमफलदायी रहनेछ । प्राकृतिक परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । पे्रम पक्ष पनि यो साता उन्नत नै देखिन्छ । सम्बन्धमा प्रगाढता थपिनेछ । धार्मिक एवं आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ । स्वास्थ्यका दृष्टिले साताको उत्तराद्र्ध कमजोर देखिन्छ । आहार विहारमा सजग रहनु उचित हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
वृष राशिः वृष राशिका लागि यो साता मिश्रित फलदायी रहनेछ । साताको अधिकांश समय चन्द्रमा अनुकुल रहनेछन् । जसले विद्या एवं वाणिज्य भावलार्य सबल तुल्याएको छ । गोचरको लग्नभावमा मंगल र राहुको निवास रहेकाले कार्यक्षेत्रमा भने संघषर्् गर्नुपर्ने देखिन्छ । परिश्रमको उचित प्रतिफल भने मिल्नेछ । आगो, विजुली एवं अग्निजन्य वस्तुबाट भने सजग रहनु नै उचित हुनेछ । आर्थिक दृष्टिले साता सुखद् नै रहनेछ । लगानीका नयाँ मार्गप्राप्त हुनेछन् । वाणिज्यको क्षेत्र उन्नत रहनेछ । सेयर व्यवसया लाभप्रदन नै रहने देखिन्छ । पराक्रम भाव सबल देखिन्छ । निर्णप्रक्रियामा भने बुद्धिपक्षको प्रयोग सुखद् रहनेछ । मित्र सहयोग मिल्नेछ । पारिवारिक सुखका साथै सुखद् परिभ्रमण्का अवसर पनि मिल्नेछन् । प्रम प्रणयका दृष्टिले साताको उत्तराद्र्ध सुखद् देखिन्छ । सम्बन्धमा नयाँ पन थपिनेछ । सांगीतिक पक्ष सुखद् नै रहनेछ । सृजनात्मक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन् । खेल क्षेत्र पनि रुचिकर नै रहनेछ । धार्मिक दृष्टिले साता सुखद् देखिन्छ । स्वाएथ्मा भने सजग रहनुपर्ने देखिन्छ । वैदेशिकक्षेत्रबाट लाभ रहनेछ । राजनीतिक कर्मीका निम्ति भने संघर्षदायी रहनसक्ने साताको राशिफल रहेको छ ।
मिथुन राशिः मिथुन राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ । सोमवारसम्म ग्रह प्रतिकूल देखिन्छन् । जसले कार्यक्षेत्रमा संघर्षका साथै खर्चमा पनि वृद्धि हुनसकने देखिन्छ । मंगलवारपछिका सामय भने सुखद् रहनेछन् । अािर्थक दृष्टिले साताको उत्तराद्र्ध सुखद् रहनेछ । सेयर व्यवसायीका निम्ति पनि मंगलवारबाट लाभप्रद समय देखिन्छ । वस्त्र, कागजी मुलायम वस्तुका साथै औषधीजन्य वस्तुको व्यवसाय यो साता फलिभूत रहनेछ । विद्याको भाव सफल रहनेछ । सृजनात्मक कार्यमा मन प्रवृत्र हने देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक षमतामा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन् । सांगीतिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन् । मित्र पक्ष सबल रहनेछन् । पारिवारिक सुखका साथै प्रेम प्रणय पनि यो साता फलिभूत रहनेछ । धार्मिक आध्यात्मिक चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन् । कार्यप्राप्तिका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ । राजनीतिक दृष्टिले साताको उत्तराद्र्ध प्रभावकारी रहनेछ । निर्णय प्रक्रियामा अडिग रहनु नै उचित हुनेछ । खेलको क्षेत्र पनि यो साता सुखद् रहनेछ । स्वाथ्यका दृष्टिले सोमवारसम्मको समय कष्टदायी रहनसक्नेछ । शीतजन्य वस्तुबाट सजग रहनु नै उचित हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
कर्कट रािश : कर्कट राशिका लागि साता लाभदायी रहनेछ । मित्र भाव सबल देखिन्छ । प्रशासनिक कार्यक्षेत्र हुनेका निम्त साता सबल रहनेछ । पराक्रम भाव सबल देखिन्छ । मंगल र बुधवारको समय भने कार्यदायी रहनसक्ने दखिन्छ । आर्थिक दृष्टि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ । धातुजन्य वस्तुको व्यवसाय उन्नत रहनेछ । सेयर व्यवसायमा मंगल र बुधवार बाहेकका समय सुखद् रहनेछन् । कृषि व्यवसायीका निम्त पशु चौपायबाट लाभ रहनेछ । विद्याको क्षेत्र– मध्यमफलदायी रहनेछ । विद्याभावमा केतुको निवास रहेकाले ज्ञानका क्षेत्रमा अधिक परिश्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । कलात्मक पक्षको अध्ययन सुखद् रहनेछ । प्रेममा पारख बढ्नुका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि प्रापत हुनेछन् । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ रहनेछ । स्वास्थ्यको दृष्टिले मंगल र बुधवारको समय प्रतिकूल रहनसक्ने दखिन्छ । पारिवारिक पक्ष सुखद् नै रहनेछ । साताको मध्यसमय भने कार्यमा व्यवस्तता रहनुका साथै अधिक परिश्रमयुक्त रहनेछ । तत् तत् समयमा निर्णयप्रक्रियामा सजग रहनु नै उचित हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
सिंह राशिः सिंह राशिका लागि यो साता उन्नतिदायी रहनेछ । व्यवसायमा वृद्धिका साथै लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन् । कार्यक्षेत्रमा उन्नतिका योग देखिन्छन् । नेतृत्व क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । आर्थिक दृष्टिले साता सबल रहनेछ । लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन् । धातुजन्य वस्तुको व्यवापार यो साता फलदयाी रहनेछ । सेयर एवं वैैकिङ क्षेत्र पनि यो साता उन्नत नै देखिन्छ । कृषि व्यवसयीका निम्ति फलफूल एवं तरकारी जन्य वस्तुबाट लाभ रहनेछ । बिही र शुक्रवारका समयमा भने खर्चमा वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ । अन्य समय सुखद् नै देखिन्छ । विद्याको क्षेत्र उन्नत रहनेछ । कलात्मक पक्ष सबल रहनेछ । राजनीतिकर्मीका निम्ति साता संघर्षदायी रहनसक्नेछ । स्वास्थ्यको हिसाबले यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ । आफन्तजनको साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ । प्रेमको भाव सुखद् देखिन्छ । बिही र शुक्रवार लेनदेनका साथै खानपिनमा विशेष ध्यान दिनु उचित हुनेछ । लगानीका कार्यमा पनि तत् दिन अग्रसर नरहनु नै उचित हुनेछ साताको राशिफल रहेको छ ।
कन्या राशिः कन्या राशिका लागि साता अर्थदायी रहनेछ । साताभरि नै चन्द्रमाको अनुकूलता रहनेछ । जसले कार्यक्षेत्रेमा उन्नतिका साथै पद प्रतिष्ठामा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन् । धनको क्षेत्र सबल देखिन्छ । आर्थिक लाभका साथै नयाँ कार्य व्यवसायमा मन प्रवृत्त हुनेछ । लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन् । सेयर व्यवसाय फलिभूत रहनेछ । बौद्धिक पक्ष सबल देखिन्छ । प्रशासनिक क्षमतामा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन् । भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनुका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । विद्याको भाव उन्नत रहनेछ । वाणिज्यको क्षेत्र सुखद् रहनेछ । खेल क्षेत्रबबाट लाभ रहनुका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि प्राप्त हुनेछन् । पारिवारिक सुखका योग देखिन्छन् । प्रेम प्रणका दृष्टिले साता सुखमय रहनेछ । गुह्य कुराको आदान प्रदानले प्रेम पक्ष मौलाउने देखिन्छ । राजनीतिको क्षेत्र यो साता सुखद् रहनेछ । वैदेशिकपक्षबाट पनि लाभका योग देखिन्छन् । स्वास्थ्यको भाव सबल रहनेछ । कला साहित्य एवं मनोरञ्जनमा सफलता मिल्ने साताको राशिफल रहेको छ ।
तुला राशिः तुला राशिका लागि साताको उत्तराद्र्ध विशेष फलदायी रहनेछ । सोमवारसम्म चन्द्बल कमजोर रहनेछ । जसले कार्यक्षेत्रमा संघर्षका साथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउनसक्ने देखिन्छ । शत्रुपक्षबाट सजग रहनु नै उचित हुनेछ । मंगलवारपछिको समय सुखद् बन्दै जानेछ । आय आर्जनका स्रोत क्रमशः बढ्दै जानेछन् । नयाँ कार्य प्राप्तिका अवसर पनि मिल्ने देखिन्छ । मित्र पक्ष सबल रहनेछन् । नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथै राजनीतिबाट लाभ हुने देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिले पनि साताको उत्तराद्र्ध सफल रहनेछ । व्यवसायमा क्रमशः वृद्धिका योग देखिन्छन् । मंगलवारपछि सेयरको लगानी प्रतिफलदायी बन्नेछ । पारिवारिक सुखका साथै आफन्तजनबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ । प्रेम जीवन सुमधुर रहनेछ । विद्याको भाव सफल रहनेछ । बौद्धिक क्ष्मतामा वृद्धिका साथै प्राज्ञिक कार्यमा संलग्नता बढ्ने देखिन्छ । कला साहित्यको क्षेत्र यो साता मध्यम फलदायी रहनेछ । सांगीतिक पक्ष मंगलवारपछि सुखद् बन्ने देखिन्छ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ योग रहेका छन् । धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नुका साथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि केही समय व्यतीत हुने देखिन्छ । खेल क्षेत्रबाट पनि लाभ रहने साताको राशिफल रहेको छ ।
वृश्चिक राशिः वृश्चिक राशिका लागि साता सुखद् रहनेछ । कार्यलाभका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर मिल्नेछन् । कर्मक्षेत्र उन्नत रहनेछ । नेतृत्व क्षमतामा वृद्धिका साथै कार्य प्राप्तिका योग देखिन्छन् । आर्थिक पक्ष यो साता मिश्रित फलदायी रहनेछ । मंगल र बुधवार ग्रहबल कमजोर रहने भएकाले तत् समय केही खर्चदायी बन्नसक्ने देखिन्छ । सेयर व्यवसाय पनि तत् समयमा स्थिर रहनसक्नेछ । अन्य समय अर्थिक दृष्टिले सुखद् रहनेछ । विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ । कलात्मक पक्षको अध्ययन गर्नेका निम्ति सुखद् रहने देखिन्छ । पारिवारिक पक्ष सुखद् रहनेछ । इष्टजनको साथ सहयोग मिल्नुका साथै सन्ततिबाट पनि लाभ रहनेदेखिन्छ । कला साहित्य एवं सृजनाको क्षेत्र मध्यम फलदायी रहनेछ । राजनीतमा उन्नतिका साथै पदप्रतिष्ठमा अभिवृद्धिका योग देखिन्छन् । पे्रम प्रणका दृष्टिले साता सुखद् रहनेछ । दाम्पत्य सुखका योग रहेका छन् । खेलकर्मीका निम्ति साता मध्यमफलदायी रहनेछ । स्वास्थ्यका दृष्टिले मंगल र बुधवारको समय कष्टदायी रहनसक्ने साताको राशिफल रहेको छ ।
धनु राशिः धनु राशिका लागि यो साता लाभदायी रहनेछ । कर्मक्षेत्र– सबल देखिन्छ । कार्य उन्नतिका साथै प्रशासनिक पक्ष सबल रहनेछ । मित्र पक्ष सबल देखिन्छन् । आर्थिक दृष्टिले साता सुखमय रहनेछ । व्यापार व्यवसायमा वृद्धिका साथै लगानीका नयाँ अवसर मिल्नेछन् । भौतिक वस्तु लाभदायी रहनेछन् । कृषिकर्मीका निम्ति फलफूल एवं दुग्धजन्य वस्तुबाट लाभ रहनेछ । सेयर व्यवसाय सुखद् नै देखिन्छ । बैंकिङ एवं बीमा क्षेत्रको लगानी प्रतिफलदायी रहने देखिन्छ । मित्र सहयोग मिल्नेछ । विद्याको क्षेत्र– सफल रहनेछ । प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ । कला साहित्य एवं संगीतको पक्ष पनि उन्नतदेखिन्छ । वैदेशिक क्षेत्र सुखद् नै रहनेछ । पारिवारिक पक्ष सबल रहनेछ । सन्नतिबाट लाभका योग देखिन्छन् । प्रेम पक्ष उन्नत रहनेछ । सुखद् परिभ्रमणले प्रेमलाई फलिभूत तुल्याउनेछ । आध्यात्मिक पक्ष सुखद् रहनेछ । बिहीवारपछिका समय केही कार्यदायी रहनसक्ने देखिन्छ । ग्रह बल कमजोर रहने भएकाले तत् समयमा लेनदेनका साथै खानपिनमा सजग रहनु नै उचित हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
मकर राशिः मकर राशिका लागि साता उन्नतिदायी रहनेछ । साताभरि नै ग्रह अनुकूल देखिन्छन् । विशेषतः चन्द्रमा अनुकूलताले कार्यषेत्रमा उन्नतिका साथै व्यवसायमा पनि सफलता दिलाउनेछन् । नयाँ कार्यमा मन अग्रसर रहनुका साथै भौतिक वस्तुबाट लाभ रहनेछ । सामाजिक कार्यम अग्रसरता बढ्ने देखिन्छ । आर्थिक दृष्टिले साता उन्नतिदायी रहनेछ । लगानीका नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन् । सेयर लागनी प्रतिफलदायी बन्ने देखिन्छ । कृषिकमीकृका निम्ति पनि सता सुखद् रहनेछ । विद्याको क्षेत्र सफल देखिन्छ । शोध अनुसन्धानका कार्यमा अग्रसरता रहनेछ । कलात्मक पक्षको अध्ययन पनि सफल रहनेछ । पारिवारिक सुखका योग देखिन्छन् । पैम भाव सबल रहनेछ । सांगीतिक क्षेत्र अर्थदायी रहनुका साथै लाभका योगपनि देखिन्छन् । शत्रु पक्ष दुर्वल रहनेछन् । वैदेशिक क्षेत्र सुखमय रहनेछ । कार्य प्राप्तिका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर प्राप्त हुनेछन् । स्वास्थ्यको भाव सबल रहनेछ । खेल क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । धार्मिक आध्यात्मिक कार्यमा संलग्नता रहनुका साथै परोपकारी कार्यमा मन प्रवृत्र रहने देखिन्छ । विशेषतः अर्थ वाणिज्यका परिसूचक सुखद् रहने साताको राशिफल रहेको छ ।
कुम्भ राशिः कुम्भ राशिका लागि साता मिश्रित फलदायी रहनेछ । कलात्मक पक्ष यो साता सुखद् रहनेछ । नेतृत्व क्षमतामा पनि वृद्धिका योग देखिन्छन् । नयाँ कार्य प्राप्तिका योग रहेका छन् । आर्थिक दृष्टिले साता सुखद् नै रहनेछ । धातुजन्य वस्तुबाट लाभका योग देखिन्छन् । सेयर व्यवसायमा वृद्धिका सूचक देखापर्नेछन् । चन्द्माको प्रतिकूलताले सोमवारसम्मको समय भने खर्चिलो रहनसक्नेछ । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्ने देखिन्छ । राजनीति एवं खेलको क्षेत्र यो साता सुखद् देखिन्छ । विद्याको भाव मध्यम फलदायी रहनेछ । प्राविधिक क्षेत्रकाके अध्ययन गर्नेका निम्त साता सुखद् रहनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभका योग देखिन्छन् । साताको आरम्भ कार्यदायी रहेपनि उत्तराद्र्ध फलदायी बन्ने देखिन्छ । प्रेम पक्ष सुखद् देखिन्छ । जसले कार्यक्षेत्रमा संघर्षका साथै खर्चमा पनि वृद्धि गराउनसक्ने देखिन्छ । मंगल र बुधवार विशेष निर्णयका कार्यमा अघि नबढ्नु नै उचित हुनेछ । यसैगरी तत् समयमा स्वास्थ्यमा पनि सजग रहनु नै लाभप्रद हुने साताको राशिफल रहेको छ ।
मीन राशि : मीन राशिका लागि साता फलदायी रहनेछ । कार्म क्षेत्र सबल देखिन्छ । प्रशासनिक क्षमतामा वृद्धिका साथै कायृक्षेत्र उन्नत रहने देखिन्छ । सामाजिक कार्यमा अधिक संलग्नता रहनेछ । आर्थिक पक्ष उन्नत रहनेछ । लगानीका नयाँ मार्ग प्राप्त हुनेछन् । सेयर व्यवसायबाट लाभका योग दखिन्छन् । पारिवारिक साथ सहयोग मिल्नुका साथै सुखद् परिभ्रमणका अवसर पनि मिल्नेछन् । विद्याको भाव फलदायी रहनेछ । वाणिज्य क्षेत्रको अध्ययन कर्ताका निम्त साता सुखद् रहनेछ । कला साहित्य एवं संगीतको पक्ष उन्नत नै देखिन्छ । पारिवारिक पक्ष सबल रहनेछ । सन्ततिबाट सुख मिल्नेछ । धार्मिक कार्यमा पनि संलग्ता रहनुका साथै अध्यात्म चिन्तनमा पनि मन प्रवृत्त रहने देखिन्छ । वैदेशि क्षेत्र लाभप्रद नै रहनेछ । मंगल र बुधवारको समय भने कार्यदायी रहनसक्ने देखिन्छ । तत् समयमा ग्रहजन्य बल कमजोर रहने भएकाले सवस्थ्यमा सजग रहनु नै उचित हुनेछ । यसैगरी तत् समयमा लेनदेनका कार्यमा बुद्धिपक्षको प्रयोग शुभ फलदायी रहने साताको राशिफल रहेको छ ।
प्रकाशित समय ०५:५७ बजे
पछिल्लाे - आज पूर्णिमाव्रत, हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ फागुन १४ गते
अघिल्लाे - ‘हाल कांग्रेस तटस्थ बस्छ’